နွေရာသီအဝတ်အစားများနှင့်ဖိနပ်များသိုလှောင်ရန်အချက် ၅ ချက် Bezzia
တောရက်စ် | 09/09/2021 10:00 | နေအိမ်
နွေရာသီကုန်ဆုံးရန်ရက်အနည်းငယ်သာရှိသေးပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းအားလပ်ရက်သစ်အတွက်စောင့်နေသည့်နွေရာသီအဝတ်အစားများနှင့်ဖိနပ်များကိုစွန့်ပစ်ရန်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ နွေရာသီကုန်ဆုံးသည်နှင့်အခွင့်ကောင်းယူရန်အချိန်ရောက်ပါပြီ ခွဲခွာခြင်းကိုလေ့ကျင့်ပြီးအသုံးမ ၀ င်သောအရာများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ပါမရ။ ကောင်းသောနွေရာသီကိုသတိရစေရန် ရည်ရွယ်၍ အဝတ်အစားများသိုလှောင်ခြင်းကြောင့်မလိုအပ်သောအရာများနှင့်ဗီဒိုကိုဖြည့်ရန်သာ ဦး တည်သည်။
နွေရာသီမှာအဝတ်အစားတွေကပိုပျက်စီးလွယ်ပြီးမင်းမှာမ ၀ တ်တော့တဲ့အ ၀ တ်တွေရှိတယ်။ ဖိနပ်များနှင့်အခြားပုံမှန်နွေရာသီအသုံးအဆောင်များနှင့်လည်းတူသည်။ အချုပ်အနှောင်နေရာများတွင်နေထိုင်ရခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့ အကောင်းဆုံးနှင့်အကျန်းမာဆုံးသောအရာသည်ရာသီပြောင်းလဲမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ဖြစ်သည် အသစ်သောအရာများအတွက်လမ်းဖယ်ရန် သင်၏နွေရာသီအဝတ်အစားများနှင့်ဖိနပ်များသိုလှောင်ရန်အချို့သောအကြံဥာဏ်များလိုအပ်ပါသလား။
1 ခံစားချက်မရှိဘူး၊ နောင်တမရဘူး
1.2 "ဖုန်စုပ်အိတ်" များကိုသုံးပါ
အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်များဖြစ်သောနွေရာသီ၊ အားလပ်ရက်များနှင့်နွေရာသီတို့နှင့်ပတ်သက်လျှင်အထူးသဖြင့်အမှတ်တရများကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအမှုမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အဝတ်အစားတစ်ခုကနွေရာသီကိုသတိရစေမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ထပ်ဘာတွေလဲ၊ သူတို့ကဘာလဲ အကြောင်းအရင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့အထိသိုလှောင်ထားပြီးစုဆောင်းထားတဲ့အရာတွေ.
ထို့ကြောင့်၊ ဤအရာသည်ခံစားချက်၊ နောင်တမပါဘဲထိုအရာများအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမင်းကိုနေ့တစ်နေ့ရဲ့အဆုံးမှာအခိုက်အတန့်တစ်ခုပေးဖို့မင်းကသူတို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခဲ့ရင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြီးသွားပြီ။ ယခုအချိန်သည်အတွေ့အကြုံသစ်များနှင့်ပြည့်စုံမည့်ရာသီသစ်တစ်ခုအတွက်အဝတ်အစားများနှင့်ဖိနပ်များအတွက်နေရာပေးရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုစီးပွားရေးကိုစလိုက်ကြရအောင် ဤအသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များကိုမှတ်သားပါ.
လာမယ့်နွေရာသီအတွက်အ ၀ တ်တွေကိုနောက်တစ်လထပ်ထုတ်တဲ့အခါအ ၀ တ်တွေထပ်လျှော်ရတဲ့အတွက်အရမ်းပျင်းဖို့ကောင်းနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အ ၀ တ်တွေကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဆောင်းရာသီတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေမှာရှိစေလိမ့်မယ်။ ဖလံ စိုစွတ်သောဒေသများတွင်အဝတ်အစားများပြန့်ပွားသည် အဝတ်အစားအမျှင်များကြား၌အစာရှာပါ.
အစွန်းအထင်းအနည်းဆုံးတစ်ခုခုကိုသင်သိုလှောင်ထားလျှင်သင်၏နွေရာသီအ ၀ တ်များမှပါတီကိုပိုးဖလံများနှင့်ပစ်ပေါက်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုသင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ မဝတ်ရသေးသောအဝတ်များကိုသန့်ရှင်းစွာထားပါသင်သူတို့ကိုထပ်ဆေးရန်မလိုပါ။ နွေရာသီအကျီများ၊ ရေသုတ်ပုဝါများ၊ ရေကူးဝတ်စုံများနှင့်မသန့်ရှင်းသောအရာများကဲ့သို့ရံဖန်ရံခါသုံးသောအရာများသာဖြစ်သည်။
ဖိနပ်နဲ့အတူတူလုပ်ပါ သင်၏ခြေညှပ်ဖိနပ်များကိုမလျှော်ဘဲထားပါ၊ ၎င်းတို့သည်ပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်မထားပါနှင့် နောက်ရာသီအတွက်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ သင်၏ဖိနပ်၏ခြေဖဝါးကိုသန့်ရှင်းပါ၊ အပြင်ဘက်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်စုတ်တံကို သုံး၍ အတွင်းခံများကိုကောင်းစွာသန့်ရှင်းပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်လာမည့်နွေရာသီအထိပြီးပြည့်စုံနေလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသောအဝတ်များကိုသိုလှောင်ရန်အိတ်တစ်ခုဖြစ်သည် သင်ဟာဖုန်စုပ်စက်ကိုထားနိုင်ပြီးအတွင်းမှလေကိုစုပ်ယူနိုင်သည်မရ။ ၎င်းတို့သည်အိတ်၏အရွယ်အစားကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေပြီးမည်သည့်ထောင့်တွင်မဆိုသိမ်းဆည်းရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဤအိတ်များသည်အလွန်လက်တွေ့ကျသည်။ သူတို့ကိုစတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာတောင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်သက်တောင့်သက်သာ၊ လက်တွေ့ကျပြီးစျေးမကြီးသောအသုံးအဆောင်များဖြစ်ပြီးသင်ရှာနေသည့်အရာအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
မင်းရဲ့နွေရာသီအ ၀ တ်နဲ့ဖိနပ်တွေကြားမှာပိုးကောင်တွေမပြန့်ပွားအောင်ကာကွယ်ဖို့ပိုးဖလံတိုက်ဖျက်ရေးအိတ်တွေထားဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏အဝတ်အစားများပေါ်တွင်ပြင်းထန်သောအနံ့ထွက်စေသောကြောင့်၎င်းကိုတခါတရံဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့်နွေရာသီအ ၀ တ်တွေကိုမပျက်စီးစေချင်ရင်တော့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်သည်ယခင်နှစ်များထက်ပိုမိုသက်သာသောရွေးချယ်မှုများရှိသည်။ သူတို့မှာဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့အနံ့တွေမရှိသလိုအဝါရောင်အဝတ်အစားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ကိုသုံးပါ၊ သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်။
မြို့များစွာ၌နွေရာသီကုန်ဆုံး။ ပူအိုက်သောနေ့ရက်များဖြစ်နေသေးသော်လည်းဗီရိုပြောင်းရန်အချိန်နှောင့်နှေးခြင်းသည်ဝေဒနာကိုကြာရှည်စေသည်။ ဤအလုပ်သည်ပင်ပန်းလှပြီးလူအများစုကသူတို့မယူချင်သောအချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဗီဒိုထဲမှာစနစ်တကျရှိဖို့၊ ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုစနစ်တကျထားဖို့၊ နေ့တိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါအချိန်ကုန်သက်သာဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်ကိုမနှောင့်နှေးပါနဲ့ သင်လိုအပ်မည့်အရာအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးသင်၏အဝတ်အစားများသိုလှောင်ရန်ဤလှည့်ကွက်များကိုသုံးပါ နှင့်နွေရာသီဖိနပ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » နွေရာသီအဝတ်အစားများနှင့်ဖိနပ်များသိုလှောင်ရန်အချက် ၅ ချက်